" လဈဗြား မှာ နတေိုးက ဘယျလို ဝငျတိုကျခဲ့လဲ..? - Pyit Time Htaung
” လဈဗြား မှာ နတေိုးက ဘယျလို ဝငျတိုကျခဲ့လဲ..?
လဈဗြား မှာ နတေိုးက ဘယျလို ဝငျတိုကျခဲ့လဲ..?
စာရေးသူ ဒီစာရေးတာက လကျနကျကိုငျ တိုကျပှဲတှေ ကို ကွိုကျလို့ မဟုတျပါ ။ စာရေးသူ တို့ တိုငျးပွညျ ကို လဈဗြားလို ဆီးရီးယားလို မဖွဈစလေိုပါ ။ ဒါပမေယျ့ သာဝဟာ သခေငျြရငျ တားမရတာရှိ ပါတယျ။ ပကျြခြိနျတနျရငျ ပကျြတတျ ပါတယျ ။
ဒါ့ကွောငျ့ သမိုငျး ကို သငျခနျးစာယူနိုငျအောငျ ရေးပွတာပါ ။ အခြို့ကလဲ ဟောငျလှနျးတဲ့ခှေး မကိုကျတတျ လို့ ပွောကွ ပါတယျ ။ ဒါလဲ မှနျနိုငျ ပါတယျ ။ ယခုလို အာဏာသိမျးဘာညာ ဆိုပွီး သာဝထောကျခံသူ ငပိနျးအုပျစုထဲမှာ ပွောနတောက ကွာခဲ့ပါပွီ။ တဈပတျတဈခါနီးနီးကို အာဏာသိမျးနတောပါ ။ ဒါပမေယျ့ သတိဆိုတာ ပိုတယျမရှိဆိုတဲ့ စကားနဲ့ ရေးလိုကျ ပါတယျ။
လစ်ဗျား မှာ နေတိုးက ဘယ်လို ဝင်တိုက်ခဲ့လဲ
၂၀၁၁ မှာပါ ။ လဈဗြား မှာ ပွညျသူတှကေ ကဒါဖီအစိုးရကို ဆန်ဒပွကွပါတယျ။ ကဒါဖီက နငျတို့ကို နှိမျနငျးမယျ ဘာညာနဲ့ ကွိမျးဝါးပါတယျ။ သူ့ရဲ့ ကုလအမွဲတမျး ဒုကိုယျစားလှယျက အစိုးရက ခှဲထှကျပွီး လယေဉျမပြံရနယျသတျမှတျဖို့ ကုလလုံခွုံရေးကောငျစီမှာ တောငျးဆိုခဲ့ပါတယျ။
သူက သူ့အစိုးရကို ဆနျ့ကငျြပွီးပါ။ မွနျမာပွညျမှာက လကျရှိ အစိုးရဟာ DASSK အစိုးရမိုလို့ သူမ နဲ့ သူမရဲ့ ဝနျကွီးတှေ ဝနျကွီးခြုပျတှကေ တောငျးဆိုရငျ နိုငျငံခွားတပျဟာ ကုလလုံခွုံရေးကောငျစီ ရဲ့ ခှငျ့ပွုခကျြမလိုဘဲ ဝငျစှကျလို့ရ ပါတယျ။ နိုငျငံတကာ ဥပမာအနေ နဲ့ ဘာရိနျးက ဆျောဒီတပျချေါတာနဲ့ ဆီးရီးယားက ရုရှားတပျချေါတာပါ ။
တရားဝငျလုံခွုံရေးကောငျစီမလိုဘဲ ရပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ DASSK အစိုးရဟာ နိုငျငံခွားက ဘယျတပျကိုမဆို တရားဝငျချေါလို့ရ ပါတယျ။ သူမ မချေါလဲ ရနျကုနျအပါအဝငျ တိုငျးနှငျ့ပွညျနယျ ဝနျကွီးခြုပျတှကေ နိုငျငံခွားတပျ ကို တရားဝငျချေါလို့ရ ပါတယျ။
ဒါဆိုရငျ လာတဲ့ နိုငျငံခွားတပျ ကို ငါတို့ရဲ့ အဘတပျက ပွနျတိုကျ လိုကျမှာပေါ့လို့ ပွောသူငတုံး မြိုးခဈြမြား ရှိမှာပါ ။ ရခိုငျမှာ ဓာတျခဲကို မနိုငျလို့ အသထှေကျပွေးပွီး လတေပျကူပါ ရတေပျကူပါ အျောခဲ့ရတာ အတိပျမမလေ့ောကျသေးဘူး ထငျပါတယျ။ လဈဗြား က ကဒါဖီမှာ အကွီးစား မွပွေငျက ဝဟေငျပဈ ဒုံးပြံ ၃၀၊ အလယျအလတျ ၁၇ ခု၊ အပေါ့စား ၅၅ ခု၊ အခွား လယေဉျပဈအမွောကျတှေ လောငျခြာတှရှေိခဲ့ပါတယျ။
လဈဗြားကို အသားထားပွီး သူ့ဆရာ ဆီးရီးယားမှာ မွနျမာပွညျက ယခုမှ ဝယျဖို့လုပျနတေဲ့ Pantsir S1နဲ့ S300 လကွေောငျးရနျ ကာကှယျရေးစနဈရှိတာတောငျ ဘာမှမလုပျနိုငျပါ။ ယခုလကျရှိ ရုရှားကဝယျထားတဲ့ လယေဉျခွောကျစီးဟာလဲ အကုနျမရောကျလာသေးပါ။ ရှိလဲ ဘာမှလုပျမရပါ။ လဈဗြားဟာ အဆိုပါလကွေောငျးရနျ ကာကှယျရေးစနဈရှိတဲ့ကွားက နတေိုးလယေဉျတှကေို မပဈခနြိုငျ ခဲ့ပါ။
ထိုအခြိနျက အိုဘားမားဟာ စဈတိုကျဖို့ သိပျစိတျမဝငျစားပါ ။ သူ့ကို တိုကျဖို့ပွောတာက သူ့ရဲ့ အမြိုးသားလုံခွုံရေးအကွံပေးရယျ အဲ့ဒီအခြိနျက နိုငျငံခွားရေးအကွံပေး ယခုဘိုငျဒငျရဲ့ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး Antony J. Blinken ပါ။ အဆိုပါအကွောငျး ကို အိုဘားမားက သူ့ရဲ့ Promised Land စာအုပျထဲမှာ ရေးထားခဲ့ပါတယျ။ စစခငျြး အင်ျဂလိပျဝနျကွီးခြုပျ ကငျမရှနျးနဲ့ ပွငျသဈသမ်မတတို့က လယေဉျမပြံရနယျလောကျသာ လုပျခငျြပမေယျ့ အိုဘားမား က သူဝငျရရငျ မွပွေငျက ပွညျသူ ကို ဒုက်ခပေးမယျ့ ကဒါဖီရဲ့ တငျ့ကားတှေ ကိုပါ ဖကျြမှရမယျ ဆိုလို့ နောကျဆုံးသဘောတူပွီး ဝငျဝုနျးကွတာပါ ။ အဆိုပါစဈပှဲ ဟာ မတျလမှာစပွီး အောကျတိုဘာမှာ ကဒါဖီသတောနဲ့ အဆုံးသတျ ပါတယျ။
ဒါဆိုရငျ နိုငျငံခွားတပျဝငျအောငျ ဘာတှလေုပျရလဲ ။ ပုံမှနျမှာက ပွညျသူတှကေ အာဏာရှငျအစိုးရကို ဆန်ဒပွ၊ ဒါကို နိုငျငံခွားက ဝငျကူပေါ့ ။ မွနျမာပွညျမှာက တရားဝငျ အစိုးရကို သာဝက သူပုနျထပွီး အာဏာသိမျး မှ ဆန်ဒပွရမှာပါ ။ တရားဝငျ အစိုးရကို အာဏာသိမျးလို့ သာဝဟာ အကွမျးဖကျသမား သူပုနျဖွဈသှားမှာပါ ။ သူဟာ ICC မှာ တရားစှဲခံရနိုငျ တဲ့ တရားခံဖွဈနလေို့ သူကပွညျသူတှေ ကို ဒုက်ခပေးမယျဆိုတဲ့ အကွောငျးပွခကျြကို ကမ်ဘာက လကျခံဖို့ မခကျခဲပါ ။
နောကျပွီးတော့ ပွညျသူတှမှော ကလဲ လဈဗြားတျောလှနျရေး လို ဆီးရီးယားတျောလှနျရေး လို ခေါငျးဆောငျမရှိတာ မဟုတျဘဲ မွနျမာပွညျ မှာက ခေါငျးဆောငျ နဲ့ တရားဝငျ အစိုးရက ရှိနပွေီးသားပါ ။ သူက သူပုနျထတာသာဖွဈပွီး သူပုနျခေါငျးဆောငျ ကို ဖမျးဖို့ နှိမျနငျးဖို့သာ လိုတာပါ ။
ပွညျသူတှကေ သူအာဏာ သိမျးရငျ အသကျအသခေံပွီး ဆန်ဒပွမလား ဆိုတဲ့ မေးခှနျးပါ ။ မွနျမာပွညျ ရဲ့ ပွညျမအားလုံးဟာ နီပွီးသားပါ ။ ဒါ့ကွောငျ့ သူသာအာဏာသိမျးခဲ့ ရငျ ထိုငျးလို လှယျလှယျရမှာ မဟုတျဘဲ အသအေပြောကျမြားမှာပါ ။ ထိုငျးဟာ အမရေိကနျ နဲ့ စဈရေးစာခြုပျရှိလို့ ဝငျမစှကျတာပါ ။ မွနျမာနဲ့က ဘာမှမရှိလို့ ဝငျစှကျရလှယျ ပါတယျ။ နောကျမွနျမာပွညျ မှာက ထိုငျးလို မဟုတျဘဲ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျတှကေ ရှိပွီးသားမိုလို့ ဒီအခြိနျ မှာ သူတို့နဲ့ ပေါငျးစပျပွီး သာဝကို အပွီးကိုငျဖို့က ပိုလှယျနိုငျ ပါတယျ။
နောကျမေးခှနျး တဈခုက တပျထဲကနေ ပွညျသူ့စဈသားတှေ ဟာ ဆီးရီးယား နဲ့ လဈဗြားမှာလို ပွညျသူ နဲ့ လာပေါငျးမလား ဆိုတာပါ။ သာဝအမိနျ့ကို နာခံတဲ့ ရာထူးကွီးတှေ ရှိနိုငျပမေယျ့ အောကျခွကေ တပျမတျောသားတှဟော သူတို့ တပျခြုပျဟာ အာဏာ သိမျးရငျ သူပုနျမိုလို့ သူပုနျရဲ့ အမိနျ့ကို မနာခံဘဲ အစိုးရနဲ့ ပွညျသူကို ပေါငျးရတာ လှယျမှာပါ ။ ရခိုငျစဈမွပွေငျမှာတောငျ သူတို့လူမြိုးတှကေ ဘကျပွောငျးသှားကွ ပါတယျ။
စာရေးသူတို့ ပွညျသူ အမြားစုက အမရေိကနျ (သို့) အနောကျတိုငျးကသာ ဝငျစှကျနိုငျတယျ လို့ ထငျထားပမေယျ့ တရုတျဟာလဲ DASSK ကို ထောကျခံသူအနေ နဲ့ ပါလာနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အမရေိကနျ နဲ့ ဥရောပက စာရေးသူတို့နဲ့ စနဈတူ ပါတယျ ။ အဆုံးမှာတော့ သာဝသူပုနျ ကို ဖမျးထိနျးဖို့က ရတဲ့ အကူအညီယူရမှာပါ ။
အကဉျြးခြုပျပွော လိုတာက သူပုနျထခဲ့ ရငျတော့ မနိုငျရငျ ကွိုးမိနျ့ပါလို့ ကွိုပွောထား ပါရစေ ။ နယျသာလနျကလဲ သာဝ ကို စောငျ့ကွိုနေ ပါတယျ ။ မဖွဈခဲ့ရငျ အကောငျးဆုံးပါ ။ ဒဝေဒတျဟာ မွမွေိုတဲ့အထိ မိုကျသှားလို့ အမှားမလုပျမိအောငျ ရေးပွတာပါ။
Myat Tun Oo ( လေးစားစှာဖွငျ့ ဆရာအား ခရကျဒဈပေးပါသညျ )
လစ်ဗျား မှာ နေတိုးက ဘယ်လို ဝင်တိုက်ခဲ့လဲ..?
စာရေးသူ ဒီစာရေးတာက လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲတွေ ကို ကြိုက်လို့ မဟုတ်ပါ ။ စာရေးသူ တို့ တိုင်းပြည် ကို လစ်ဗျားလို ဆီးရီးယားလို မဖြစ်စေလိုပါ ။ ဒါပေမယ့် သာဝဟာ သေချင်ရင် တားမရတာရှိ ပါတယ်။ ပျက်ချိန်တန်ရင် ပျက်တတ် ပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင့် သမိုင်း ကို သင်ခန်းစာယူနိုင်အောင် ရေးပြတာပါ ။ အချို့ကလဲ ဟောင်လွန်းတဲ့ခွေး မကိုက်တတ် လို့ ပြောကြ ပါတယ် ။ ဒါလဲ မှန်နိုင် ပါတယ် ။ ယခုလို အာဏာသိမ်းဘာညာ ဆိုပြီး သာဝထောက်ခံသူ ငပိန်းအုပ်စုထဲမှာ ပြောနေတာက ကြာခဲ့ပါပြီ။ တစ်ပတ်တစ်ခါနီးနီးကို အာဏာသိမ်းနေတာပါ ။ ဒါပေမယ့် သတိဆိုတာ ပိုတယ်မရှိဆိုတဲ့ စကားနဲ့ ရေးလိုက် ပါတယ်။
၂၀၁၁ မှာပါ ။ လစ်ဗျား မှာ ပြည်သူတွေက ကဒါဖီအစိုးရကို ဆန္ဒပြကြပါတယ်။ ကဒါဖီက နင်တို့ကို နှိမ်နင်းမယ် ဘာညာနဲ့ ကြိမ်းဝါးပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ကုလအမြဲတမ်း ဒုကိုယ်စားလှယ်က အစိုးရက ခွဲထွက်ပြီး လေယဉ်မပျံရနယ်သတ်မှတ်ဖို့ ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီမှာ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
သူက သူ့အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ပြီးပါ။ မြန်မာပြည်မှာက လက်ရှိ အစိုးရဟာ DASSK အစိုးရမိုလို့ သူမ နဲ့ သူမရဲ့ ဝန်ကြီးတွေ ဝန်ကြီးချုပ်တွေက တောင်းဆိုရင် နိုင်ငံခြားတပ်ဟာ ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီ ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်မလိုဘဲ ဝင်စွက်လို့ရ ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ ဥပမာအနေ နဲ့ ဘာရိန်းက ဆော်ဒီတပ်ခေါ်တာနဲ့ ဆီးရီးယားက ရုရှားတပ်ခေါ်တာပါ ။
တရားဝင်လုံခြုံရေးကောင်စီမလိုဘဲ ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် DASSK အစိုးရဟာ နိုင်ငံခြားက ဘယ်တပ်ကိုမဆို တရားဝင်ခေါ်လို့ရ ပါတယ်။ သူမ မခေါ်လဲ ရန်ကုန်အပါအဝင် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်တွေက နိုင်ငံခြားတပ် ကို တရားဝင်ခေါ်လို့ရ ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် လာတဲ့ နိုင်ငံခြားတပ် ကို ငါတို့ရဲ့ အဘတပ်က ပြန်တိုက် လိုက်မှာပေါ့လို့ ပြောသူငတုံး မျိုးချစ်များ ရှိမှာပါ ။ ရခိုင်မှာ ဓာတ်ခဲကို မနိုင်လို့ အသေထွက်ပြေးပြီး လေတပ်ကူပါ ရေတပ်ကူပါ အော်ခဲ့ရတာ အတိပ်မမေ့လောက်သေးဘူး ထင်ပါတယ်။ လစ်ဗျား က ကဒါဖီမှာ အကြီးစား မြေပြင်က ဝေဟင်ပစ် ဒုံးပျံ ၃၀၊ အလယ်အလတ် ၁၇ ခု၊ အပေါ့စား ၅၅ ခု၊ အခြား လေယဉ်ပစ်အမြောက်တွေ လောင်ချာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။
လစ်ဗျားကို အသားထားပြီး သူ့ဆရာ ဆီးရီးယားမှာ မြန်မာပြည်က ယခုမှ ဝယ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ Pantsir S1နဲ့ S300 လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးစနစ်ရှိတာတောင် ဘာမှမလုပ်နိုင်ပါ။ ယခုလက်ရှိ ရုရှားကဝယ်ထားတဲ့ လေယဉ်ခြောက်စီးဟာလဲ အကုန်မရောက်လာသေးပါ။ ရှိလဲ ဘာမှလုပ်မရပါ။ လစ်ဗျားဟာ အဆိုပါလေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးစနစ်ရှိတဲ့ကြားက နေတိုးလေယဉ်တွေကို မပစ်ချနိုင် ခဲ့ပါ။
ထိုအချိန်က အိုဘားမားဟာ စစ်တိုက်ဖို့ သိပ်စိတ်မဝင်စားပါ ။ သူ့ကို တိုက်ဖို့ပြောတာက သူ့ရဲ့ အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးရယ် အဲ့ဒီအချိန်က နိုင်ငံခြားရေးအကြံပေး ယခုဘိုင်ဒင်ရဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Antony J. Blinken ပါ။ အဆိုပါအကြောင်း ကို အိုဘားမားက သူ့ရဲ့ Promised Land စာအုပ်ထဲမှာ ရေးထားခဲ့ပါတယ်။ စစချင်း အင်္ဂလိပ်ဝန်ကြီးချုပ် ကင်မရွန်းနဲ့ ပြင်သစ်သမ္မတတို့က လေယဉ်မပျံရနယ်လောက်သာ လုပ်ချင်ပေမယ့် အိုဘားမား က သူဝင်ရရင် မြေပြင်က ပြည်သူ ကို ဒုက္ခပေးမယ့် ကဒါဖီရဲ့ တင့်ကားတွေ ကိုပါ ဖျက်မှရမယ် ဆိုလို့ နောက်ဆုံးသဘောတူပြီး ဝင်ဝုန်းကြတာပါ ။ အဆိုပါစစ်ပွဲ ဟာ မတ်လမှာစပြီး အောက်တိုဘာမှာ ကဒါဖီသေတာနဲ့ အဆုံးသတ် ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် နိုင်ငံခြားတပ်ဝင်အောင် ဘာတွေလုပ်ရလဲ ။ ပုံမှန်မှာက ပြည်သူတွေက အာဏာရှင်အစိုးရကို ဆန္ဒပြ၊ ဒါကို နိုင်ငံခြားက ဝင်ကူပေါ့ ။ မြန်မာပြည်မှာက တရားဝင် အစိုးရကို သာဝက သူပုန်ထပြီး အာဏာသိမ်း မှ ဆန္ဒပြရမှာပါ ။ တရားဝင် အစိုးရကို အာဏာသိမ်းလို့ သာဝဟာ အကြမ်းဖက်သမား သူပုန်ဖြစ်သွားမှာပါ ။ သူဟာ ICC မှာ တရားစွဲခံရနိုင် တဲ့ တရားခံဖြစ်နေလို့ သူကပြည်သူတွေ ကို ဒုက္ခပေးမယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်ကို ကမ္ဘာက လက်ခံဖို့ မခက်ခဲပါ ။
နောက်ပြီးတော့ ပြည်သူတွေမှာ ကလဲ လစ်ဗျားတော်လှန်ရေး လို ဆီးရီးယားတော်လှန်ရေး လို ခေါင်းဆောင်မရှိတာ မဟုတ်ဘဲ မြန်မာပြည် မှာက ခေါင်းဆောင် နဲ့ တရားဝင် အစိုးရက ရှိနေပြီးသားပါ ။ သူက သူပုန်ထတာသာဖြစ်ပြီး သူပုန်ခေါင်းဆောင် ကို ဖမ်းဖို့ နှိမ်နင်းဖို့သာ လိုတာပါ ။
ပြည်သူတွေက သူအာဏာ သိမ်းရင် အသက်အသေခံပြီး ဆန္ဒပြမလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါ ။ မြန်မာပြည် ရဲ့ ပြည်မအားလုံးဟာ နီပြီးသားပါ ။ ဒါ့ကြောင့် သူသာအာဏာသိမ်းခဲ့ ရင် ထိုင်းလို လွယ်လွယ်ရမှာ မဟုတ်ဘဲ အသေအပျောက်များမှာပါ ။ ထိုင်းဟာ အမေရိကန် နဲ့ စစ်ရေးစာချုပ်ရှိလို့ ဝင်မစွက်တာပါ ။ မြန်မာနဲ့က ဘာမှမရှိလို့ ဝင်စွက်ရလွယ် ပါတယ်။ နောက်မြန်မာပြည် မှာက ထိုင်းလို မဟုတ်ဘဲ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေက ရှိပြီးသားမိုလို့ ဒီအချိန် မှာ သူတို့နဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီး သာဝကို အပြီးကိုင်ဖို့က ပိုလွယ်နိုင် ပါတယ်။
နောက်မေးခွန်း တစ်ခုက တပ်ထဲကနေ ပြည်သူ့စစ်သားတွေ ဟာ ဆီးရီးယား နဲ့ လစ်ဗျားမှာလို ပြည်သူ နဲ့ လာပေါင်းမလား ဆိုတာပါ။ သာဝအမိန့်ကို နာခံတဲ့ ရာထူးကြီးတွေ ရှိနိုင်ပေမယ့် အောက်ခြေက တပ်မတော်သားတွေဟာ သူတို့ တပ်ချုပ်ဟာ အာဏာ သိမ်းရင် သူပုန်မိုလို့ သူပုန်ရဲ့ အမိန့်ကို မနာခံဘဲ အစိုးရနဲ့ ပြည်သူကို ပေါင်းရတာ လွယ်မှာပါ ။ ရခိုင်စစ်မြေပြင်မှာတောင် သူတို့လူမျိုးတွေက ဘက်ပြောင်းသွားကြ ပါတယ်။
စာရေးသူတို့ ပြည်သူ အများစုက အမေရိကန် (သို့) အနောက်တိုင်းကသာ ဝင်စွက်နိုင်တယ် လို့ ထင်ထားပေမယ့် တရုတ်ဟာလဲ DASSK ကို ထောက်ခံသူအနေ နဲ့ ပါလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမေရိကန် နဲ့ ဥရောပက စာရေးသူတို့နဲ့ စနစ်တူ ပါတယ် ။ အဆုံးမှာတော့ သာဝသူပုန် ကို ဖမ်းထိန်းဖို့က ရတဲ့ အကူအညီယူရမှာပါ ။
အကျဉ်းချုပ်ပြော လိုတာက သူပုန်ထခဲ့ ရင်တော့ မနိုင်ရင် ကြိုးမိန့်ပါလို့ ကြိုပြောထား ပါရစေ ။ နယ်သာလန်ကလဲ သာဝ ကို စောင့်ကြိုနေ ပါတယ် ။ မဖြစ်ခဲ့ရင် အကောင်းဆုံးပါ ။ ဒေဝဒတ်ဟာ မြေမြိုတဲ့အထိ မိုက်သွားလို့ အမှားမလုပ်မိအောင် ရေးပြတာပါ။
Myat Tun Oo ( လေးစားစွာဖြင့် ဆရာအား ခရက်ဒစ်ပေးပါသည် )
Posted in Local NewsTagged တရားဝငျလုံခွုံရေးကောငျစီ
Previous post ” ပငျလယျနကျထဲက ထရမျ့ပျ ” ( သို့ ) ထရမျ့ပျ နဲ့ တူတဲ့ ငါးမနျးပုံ လူမှုမီဒီယာမြား တှငျ ရပေနျးစားနေ
Next post မွနျမာနိုငျငံ ၏ သာသနာ့ ဂုဏျထူးဆောငျ အမွငျ့ဆုံး ဘှဲ့တံဆိပျတျော ဆကျကပျ ခြီးမွှငျ့ခံ ရသညျ့ ဒေါကျတာ ဘဒ်ဒန်တ ဉာဏိဿရ ဆရာတျောကွီး မှ မွနျမာအစိုးရ ၏ ကိုဗဈ ကာကှယျဆေး ရနျပုံငှေ သို့ အမရေိကနျ ဒျေါလာ ၃၀၀၀ လှူဒါနျး